トップページ ＞ 言語 ＞ ズールー語 ＞ Ithebula ukukhetha ngesikhathi pachinko eshintsha umcimbi
Pachinko emakhazeni ngesikhathi umcimbi sibonakala nakakhulu yesithombe yempikiswano, kodwa ayikho into enjalo. Njalo ithebula yokutakula ngisho ngesikhathi umcimbi abakhona. Yiqiniso, njengoba esiqhutshwa sizikhiphe njalo, ukuba abe uma endaweni yesikhulumi ukukhetha uma lula kuqhathaniswa njalo kuyiqiniso, ukuze kuncishiswe kokutshalwa kwezimali, bayofaka kukhethwa yesikhulumi ngesikhathi umcimbi aphethwe.
Okokuqala, ngifuna ukugxila isikhathi somcimbi uyisibonelo uphawu esitolo ngamunye. Ukuze
imodeli billboard izitolo, ngoba iningi ufuna ukunikeza imodeli yakho, ngokwanele ukuba abe umcimbi omkhulu, kufanele ufake amandla phezu onobuhle billboard e wamakhaza pachinko. Imodeli uphawu kuphela, yilokho okuphuma yokuthuthukisa isethi Horukon nail ukulungiswa kuka njalo evamile. Ukukhethwa imodeli ngesikhathi kwenzeka, khumbula umdlalo imifanekiso ebhodini lesikhangiso.
Kunalokho, ungafaki amandla kakhulu, falling emuva imodeli yokutakula ngesikhathi kwenzeka okuthiwa yiyona Xintai.
e Xintai, ngisho ngaphandle kokuvula izinzipho kancane, ngakho ngathi ehlezi amakhasimende ngaphandle okwandisa Horukon kulungiselelwa, Xintai yiyona ngokuvamile senziwe imodeli yokutakula reverse. Banikezwe
■ lapha ezibalulekile
pachinko emakhazeni inqubomgomo ibhizinisi, ukwandisa isibalo amakhasimende is isenzo lokukhipha wenkokhelo, kwenziwe ukuze kangcono namakhasimende, wenkokhelo endaweni khona abantu ngaphandle ukwenza noma yini awudingi ukuba sikhiphe. Lokhu kungaba kuhle khumbula ngoba okuyisisekelo base. Uma usutholile le
hit onobuhle yena, kodwa idatha, lapha zama ukugxila etafuleni ecasukile ngayizolo. Ngosuku olwandulela sizindza lesicinile, kukhona kungenzeka ukuthi Horukon isethi nail ukulungiswa ayikashintshi nail evamile. Nokho, esimweni ukungasebenzi block, nokuvusa Horukon kulungiselelwa, kungenzeka ukuvula isipikili.
ngesikhathi sesehlakalo, ngoba kukhona usuku ofuna ukukhalaza wenkokhelo, kodwa thina uku Gonna welula Yiqiniso, kuyoba aqatha okwengeziwe kufuthwe kusilela futhi wayevusa le Horukon isethwe ku eqinile, njengalokhu kunjalo. Kuze kube yimanje, aqatha, ke Ngokuqinisekile eziningi bakubona njengenjwayelo.
Ngakolunye uhlangothi, ethebuleni ecasukile njengoba kuba nail, umthelela kuyoba ababuthakathaka hhayi kaphendukelanga kuphela njengenjwayelo. Ngaphezu kwalokho, okusho ukuthi naye umcimbi njengoba esitolo uma ungeke uphume izolahleka. Ngakho, uphatheke kabi ukuma ukuze uthole ijubane ukujikeleza, ngaphandle okwandisa isethi Horukon, kukhona ukuvula nail kunokujwayelekile.